Gobolka Minesota ee ay Soomaalidu sida weyn u degto ayaa toddobaadkan laga sheegay inay weli ka baxayaan dhalinyarao Soomaali ah oo ku biiraya ururka Al-Shabab.
Dhinaca kalena, dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaalida ah ayaa sannadihii ugu dambeeyey ka dhigtay dadka Soomalaida ah kuwo si gaar ah looga ugaarsado garoomada diyaaradaha ee laga dhoofo ama laga soo dego. Hay’adaha qaabilsan ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta ee Maraykanka ayaa sheegay in Soomaalidu ugu badan yihiin dadka xilligan lagu joojiyo garoomada.
Shaqsiyaadkan midkoona laguma helin inay ku lug leeyihiin falal argagixiso, waxaase si joogta ah ay ciidamada amnigu u weydiiyaan su’aalo la xiriira ururka Al-Shabab.
Barnaamijkan Faaqidaadda Toddobaadka waxaan ku eegayaa saddex waaya-aragnimada qaar ka mid ah Soomalaid alaga ugaarsado garoomada; nooca dabagalka lagu hayo iyo sida Soomaalidu uga hortagi karto qaab sharciga waafaqsan. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey.